IVinyl Cofa umsiki
Ngaba uyazi zonke iintlobo zomgangatho?
Umgangatho yinto yomgangatho ekungekho lula ukwenza iimpazamo kuyilo kunye nomdlalo, kwaye kukho ukhetho oluninzi lwezixhobo zomgangatho, ke namhlanje ndiza kukuthatha ukuba uqonde ukuba zeziphi iintlobo zemigangatho ezikhoyo. Eli nqaku lihlalutya ikakhulu imigangatho emine ephambili: Injineli yomgangatho weHardwood ...
Amanqaku amathathu omgangatho, amanqaku asixhenxe wofakelo, uninzi lwabantu aluzihoyi ezi nkcukacha zofakelo lomgangatho!
Bekusoloko kukho intetho kwishishini le-flooring elithi i-flooring yeplanga "yindawo yomgangatho omathathu kunye nofakelo lwamanqaku asixhenxe", oko kukuthi, ingaba ufakelo lulungile okanye alumiseli i-70% yomgangatho womgangatho. Ukusetyenziswa okungonelisiyo komgangatho kubangelwa ikakhulu kukungalunganga ...
Imbeko kwilizwe lomama: Usuku lokuzalwa olumnandi kwiqela lethu lamaKomanisi laseTshayina
Sikelela ilizwe lomama lichume kwaye lichumile! I-2021 sisikhumbuzo seminyaka eli-100 sokusekwa kweQela lamaKomanisi lase China. ...
I-Unilin isungula ukutyabeka okungangeni manzi kwi-Unicoat-Kumgangatho weendaba
Nge-9 kaJuni, ngo-2021 [eBelgium] i-Unilin Technologies ibhengeze ukuba ukutyabeka okungangeni manzi "Unicoat" yinto entsha yamalungelo awodwa omenzi wechiza kwipotifoliyo yayo yelungelo elilodwa lomenzi. Inkampani yatsho ukuba i-Unicoat yokuthintela amanzi yenze eyona nto ikhuselekileyo ekuvuzeni amanzi kwaye ithintele umonakalo ...
Inombolo 67, Qilian Street, Shijiazhuang, Hebei, China.